အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ Flat Spiral Torsion Spring? အကောင်းဆုံး Flat Spiral Torsion Spring အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
ဤနှစ်, Tong Na Enterprise Co., Ltd. ၏ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်မျိုး Flat Spiral Torsion Spring တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်မြင့်တက်စုစုပေါင်းဝင်ငွေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်မြင့်မားသောကြောင့်အရည်အသွေးနှင့်ကောင်းစွာပြီးနောက်-ရောင်းချခြင်းန်ဆောင်မှုကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ထို့အပြင်, အရည်အသွေးတည်ငြိမ်နှင့်စျေးနှုန်းသင့်လျော်သည်။
ပုံစံ - 7-5
Volute Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစောဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။,40 နှစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ,နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးသည် အလွန်ကျွမ်းကျင်သည်။,ပြည်တွင်းကားစက်ရုံများတွင် အသုံးပြုမှုအပြင်၊,ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ကားတပ်ဆင်စက်ရုံများသို့လည်း တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။.
4Q18 Flat Spring,၃.2*8.2mm
RV Angle Adjuster အတွက် Volute Spring,Saponification လုပ်ငန်းစဉ် Coating ကုသမှု
Delivery Quantity ညှိနှိုင်းပေးချေမှုနည်းလမ်း
ကြွက်တက်ခြင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်းအထိ,လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။,အရွယ်အစားနှင့် ခွန်အားကို ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး နမူနာစမ်းသပ်မှုများကို ပေးနိုင်ပါသည်။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/flat-spiral-torsion-spring.html
အကောင်းဆုံး Flat Spiral Torsion Spring ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Flat Spiral Torsion Spring မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ